Gaz-3105 - Class eliPhezulu esidlule
Udaba zokushintsha ngoxhaxha kubaholi Union wayesema phezulu 90-yalolucwaningo kwekhulu elidlule. "We-seagull" okwamanje esiphelelwe isikhathi, ngakho-ke sivunyiwe isinqumo "baba" model entsha esivaliwe ngaphezulu. Okunjalo ohlelweni kwakufanele abe ku Gaz-3105.
Union waziwa siphukile, futhi umholi omusha lingafunyanwa - umshini ekhiqizwa ingqikithi yeminyaka engu-4. Ngamagama izici lobuchwepheshe, Gaz-3105 (Car izithombe namuhla kungatholakala kuphela imithombo ezikhethekile) athakazelisa ngokukhethekile, ngoba ngaleso sikhathi kwaba ephezulu ikilasi umkhakha auto yasekhaya. Four-wheel drive, cylinder ayisishiyagalombili uphethiloli injini elenziwe ngesikhumba aluminium ingxubevange isilinda ikhanda, lo yokuxhumana ukuthungela uhlelo isimame nemishayo, amasondo aluminium ingxubevange, ABS - nibone, ngokuba isethi ezinhle imoto zasekhaya 90 zokuqala. Inketho etholakalayo alulona olwawo wonke umuntu.
Imoto ifakwe mechanical ezinhlanu-gearbox, kwakheka block ne phambi oluvala amasondo kanye umehluko interaxle, okuyinto ngaleyo ndlela has a uwoyela okugeza ezivamile nabo. Clutch - olulodwa-disk, isici kwaba ukuthi lapho bamba liyasuswa injini. Front futhi bakhulise amabhuleki - disc, nge "ezintantayo" ukudla. Yebo, into eyodwa ngaphezulu, "iVolga" Gaz-3105 - umshini wokuqala, esalungiselelwa ngayo indlela eziqondisa yokubeka. Ikholomu eziqondisa kuyinto adjustable futhi ukulungiswa, kanye emthambekeni futhi unikezwa ilungu amandla abaningi.
Layout Gaz-3105 injini gumbi obukhulu, futhi lokho kwenza isikhala ukuze imilenze front. Usofa ezingemuva lehliselwa kuya oluvala amasondo ezingemuva yangibeka - ngokuziqhathanisa imodeli 31029 banikezwe ithuba ukuthenga isikhathi eside kunaleso 3 cm Ngaphezu kwalokho, esihlalweni ezingemuva nayo ulungise engela ukuthambekela ngemuva .. Ukushisa Kuncike nezilungiselelo esihlalweni sikagesi. isilawuli Climate gumbi ihlanganisa ukusebenza air conditioning, umoya bafudumale. Mayelana ukufakwa isikhulumi futhi uthi cha - salokhu ikilasi umshini Yiqiniso, hhayi ukungcebeleka. Ubukhulu of Gaz-3105 - efana "amabili nesishiyagalolunye" imodeli ngaphandle umehluko ezincane ububanzi. Ngokwengxenye enkulu, zombili onobuhle ukhululekile ngokulinganayo futhi evulekile, futhi okufanayo kusebenza iziqu kokubili onobuhle.
Konke okungenhla kuziwa imodeli ukukhiqizwa Gaz-3105, Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi iwuhlelo kwadingeka lenqwaba ongakhetha pre-production. Ngokwesibonelo, ezimotweni lokuqala ifakwe ohlangothini amafasitela ngaphansi komugqa ibhande futhi embodiments ngabanye zavezwa nge ngehele plastic.
Njengoba sekuzoqala kwethulwa imoto Gaz-3105 yena wethulwa emphakathini ngesikhathi International Motor Show Brussels and Leipzig, lapho wenza ukuba izivakashi zakwamanye amazwe okungcono okuvelayo. Nokho, kuleli zwe nomuzwa wokuthi ekukhiqizweni kulo mshini kuba kuphela imibuthano kahulumeni ebiza kakhulu. Yingakho lesi sitshalo kwaveza izimoto 55 kuphela, esikhundleni ivolumu kuhlelwe ngaphambili amayunithi 250 ngonyaka iminyaka 4 zokukhiqiza (1992 kuya ku-1996).
Indlela ukuhlanza carburetor Vaz 2107?
Yohlobo lweToyota Corolla E120: yonke imininingwane mayelana omunye emotweni uthenge kakhulu eJapane
"Igolide Nescafe": umthengi Izibuyekezo
League of Legends, Shyvana: isiqondiso. Shivana: incazelo yamakhono, amaqhinga womdlalo
Kuthiwani ezindlini eziqashiwe
Umdlali wezinyawo u-Alexander Panov kanye nesikole sakhe sebhola
Cook'kareku ( "iqhude") - yokudlela ibhulakufesi. Kepha akusikho lokho kuphela
Echinacea izingane: imfundo encane kubazali